Soo dejisan TunnelBear 2.3.25 – Vessoft
Programka sirta, Internet
Soo dejisan TunnelBear
TunnelBear – software ah in ay helaan ay ku websites gaarka loo leeyahay. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay sir gaadiidka socda iyo xilka of VPN channel isticmaalaya furaha 128-bit ah. TunnelBear u saamaxaaya in ay helaan in ay websites ama videos la mamnuucay ee dalalka qaar. Barnaamijku wuxuu bixiyaa gaadiidka 500 MB ee tunneling ama sirta iyo kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho 1 GB ee gaadiidka ay u sheegaan saaxibadood ee Twitter. TunnelBear leeyahay si fudud loo isticmaali interface iyo shaqeyn karaan in asalka.
Helitaanka websites gaarka loo leeyahay
Helitaanka darey video
Comments on TunnelBear:
TunnelBear Software la xiriira:
Internet Programka sirta Waxay hubisaa joogo qarsoodi ah oo amaan ee internet-ka. software wuxuu isticmaalaa gaar ah kaydinta daruur si sir weydiimaha internet-ka.
Internet Programka sirta Software inay la shaqeeyaan teknoolajiyada VPN ah. Software waxay leedahay qalab in la abuuro channel Windows XP sida dhibic-ka-barta ama server-ka-macaamiisha.
English, Français, Español, Deutsch... UltraSurf 16.03
Internet Programka sirta Software ee booqashada ku qarsoodi ah websites internet-ka. Software wuxuu taageeraa technology gaar ah oo sir ka kala iibsiga xogta iyo macluumaadka ka dhinac saddexaad.
Internet Programka sirta software ah ee xidhiidhka la ilaaliyo iyo fadhiyada web ammaan ee internet-ka. Qarsoodiga ah ee wax hawlaha online waxaa lagu gaarayaa by isbedelka of the user ee IP-address.
العربية, English, Français, Español... Psiphon 3
Internet Programka sirta Software si ay u helaan in ay internetka hor istaagay oo gab faafreebka internet-ka. Sidoo kale software awood u si ay u ilaaliyaan xisaab user iyo sirta ka dhanka ah jabsiga ah.
NetWorx 5.5.5 Standard iyo Portable
Imtixaanka Internet Tababaraha gaadiidka internet. Sidoo kale software awood u la qabsato xawaaraha wareejinta xogta isla markaana kormeertaa qaabka la xiriira internet-ka.
العربية, English, Українська, Français... Router Keygen 1.1
Internet Easy in ay isticmaalaan matoor muhiimka ah ee router ee noocyada kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay decrypt sirta ah ee network Wi-Fi la isticmaalayo database hubaal ah loogu daydo qaar ka mid ah router.
Internet software ah in garab la gelin xogta account aad adigoo buuxinaya foomamka web si toos ah. software The buuxiyo foomamka diiwaangelinta la mid click.
العربية, English, Українська, Français... TrueCrypt 7.2
Programka sirta Saxannada software la set badan oo ah qalab si sir xogta. Waxaa suurogal ah in ay sir ka kooban oo ka mid ah cajaladaha adag iyo sidayaal kale xogta.
English, Français, Deutsch, Italiano... Clean Master 1.0
Ayna System Software ayaa si aad u nadiifiso nidaamka ka faylasha haraaga ah oo ku meel gaar ah. Sidoo kale software awood u tirtirto ka plugins iyo codsiyada kala duwan.
Files riixo software The ku cadaadisaa iyo decompress buugagga taariikhda oo kala duwan. software wuxuu taageeraa diinta ka dhexeeya qaabab archive iyo awood inuu ka soo kabsado buugagga taariikhda oo burburay.
العربية, English, Українська, Français... KakaoTalk 2.2.4.1337
Chat Isgaarsiinta Voice Software ayaa doonaya in uu codkiisa iyo isgaarsiinta iyadoo dadka kale ee qoraalka. Software ayaa awood u dhigay si sir ah u helaan lagu sheekeysto iyo reserved sanduuqa hadal baahida user ah.
Mozilla Thunderbird 45.3 iyo 49 beta 1
E-mail software multifunction ee shaqada ugu wax soo saar leh e-mail. software waxa uu leeyahay nidaamka ammaanka iyo spam ah filtarrada awood badan.
العربية, English, Українська, Français... Ventrilo 3.0.8
Isgaarsiinta Voice Software ayaa awood badan ku hadalka codka ee shabakadda. Software waxay bixisaa ah gudbinta codka tayo sare leh oo waxaa inta badan ka mid ah ayaa isagana ka xirfad loo isticmaalo.
Garmin Express 4.1.28